Imwe ikholamu hydraulic screen chinja akateedzana:
● Hapana mechina chisimbiso chimiro, icho chinogona kuvimbisa yakakwira kumanikidza uye kwakanyanya tembiricha mamiriro kwete seep zvigadzirwa. Nekunyatso kudzora shanduko screen kuramba, kudzora hydraulic system kumanikidza kwebasa.
● Imwe-chidimbu dhizaini, isina kutakura kuzarura, simbisa kubereka kumanikidza, ita iyo system kutakura kumanikidza kwakakwira.
● Kushandisa Yakakwira mhando alloy simbi, mushure meitriding maitiro ekuwedzera chigadzirwa chigadzirwa hupenyu hwakareba zvakanyanya.
● Yakabatana mainjiniya yemafuta, hupenyu hwakareba hwekushandisa.
● Kushandisa mudziyo wemukati unopisa, kuitira kuchengetedza nekuchengetedza simba. Tambo dzakakomberedzwa zvizere, nekuda kwechimiro chakanakisa.
Pe Dombo Pepa Sheet Inowedzera Mutsara
HDPE Marine Pipe Extrusion Mutsetse